संस्थागत सुशासनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा. निर्देशन नं.६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालक र सञ्चालक समितिको कर्तव्य र उत्तरदायित्व, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति, कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, आन्तरिक समिति उपसमिति, आचारसंहिता तथा सुशासन, स्वघोषणा कर सम्पत्ति विवरण आदि पर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट स्रोत संकलन गरी सञ्चालन गर्ने भएकाले संस्थागत सुशासन हुनुपर्छ । नेपालमा संस्थापित व्यापारिक फर्म, संस्था, कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी सुशासन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अनुमान गरिन्छ । यसको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष अनुगमन, निरीक्षण तथा निर्देशनलाई मान्न सकिन्छ । तर, यिनमा पर्याप्त सुशासन भने छैन ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो पारिश्रमिक तथा आर्थिक प्याकेजमा गर्ने मोलमोलाई, लादिएको मुनाफा प्राप्त गर्न गरिने गैरव्यावसायिक र अमर्यादित आन्तरिक तथा बाह्य क्रियाकलाप, सञ्चालक समितिमा व्यापारिक घरानाको हालिमुहाली तथा तिनको दबाब र अव्यावसायिक क्रियाकलापका कारण सुशासनमा समस्या पर्छ । कर्मचारीमा उत्पन्न महत्त्वाकांक्षा र कमजोर कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्धति, राष्ट्र बैंकको निरीक्षण, नियमन र अनुगमन क्षमताको अपर्याप्तता आदि कारण सुशासनमा कमी देखिन्छ ।
यी नै कारणले कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आप्mनो पदभारबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था छ, पर्याप्त अनुभवहीन र अपरिपक्व व्यक्तिलाई निर्णायक तहमा नियुक्ति गर्ने तथा अघिल्लो नेतृत्वलाई दोष दिने जस्ता प्रवृत्ति पाइन्छ । स्थानान्तरण वा मर्जर एवम् प्राप्तिको निहुँमा स्वैच्छिक अवकाश लिन बाध्य पारिएको पनि छ ।
विद्यमान विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा प्रतिस्पर्धाका हिसाबले थप मर्जरको आवश्यकता देखिँदैन । यिनीहरूको संस्थागत सुशासनमा भने कडा निगरानी अपरिहार्य छ । विद्यमान २७ ओटा वाणिज्य बैंक र ७१ ओटा लघुवित्त संस्थामध्ये क्रमशः ४ र ५ ओटालाई छोडेर अन्य बैंक, लघुवित्त संस्थाको हकमा संस्थागत सुशासन कायम राख्न देहायका आधारमा बाध्यकारी मर्जरमा पठाउन अपरिहार्य देखिन्छ । जुन संस्थामा एकै संस्था, व्यक्ति, परिवार तथा निजहरूको वित्तीय स्वार्थ रहेको फर्म, कम्पनीको शेयर छ, तिनीहरूको बाहुल्यका आधारमा मर्जर गराइनुपर्छ । जुनजुन संस्थाले विगत ३ र ४ वर्षदेखि औसतभन्दा कम मुनाफा प्राप्त गरी प्रतिफल दिने गरेका छन् तिनको मर्जर गराइनुपर्छ । नियमन निकायको निर्देशनलाई पहुँच र शक्तिको आडमा कानूनविपरीत हुनेगरी अर्को निर्देशन, परिपत्र जारी गर्न बाध्य बनाउने बैंकहरूलाई मर्जरमा लैजानुपर्छ । क्षणिक मुनाफाको लोभमा अनुत्पादक क्षेत्रमा संस्थागत कर्जा लगानी बढाएका र अस्थिर संस्थागत निक्षेपमा निर्भर रहेका बैंकहरूलाई मर्जरमा लैजानुपर्छ । कतिपय विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थामा पदाधिकारीहरू बेनिफिसियल ओनर भई कुनै न कुनै रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहेकाले तिनलाई मर्जरमा लैजानुपर्छ । क्षेत्रीयस्तरमा खुलेका लघुवित्त संस्थाहरू पूँजी व्यवस्थापन, आर्थिक अपारदर्शिता र कमजोर कार्यसम्पादन भएकाहरूलाई क्षेत्रगत हिसाबले मर्जर गराइनुपर्छ । औसतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा भएका संस्थाहरूलाई बाध्यकारी मर्जर आवश्यक देखिन्छ ।
व्यापारी र बैंकर छुट्ट्याउनुपर्ने आवश्यकता र संस्थागत सुशासन कायम राख्न हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा र हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदादेखि नै प्रयत्न अगाडि बढाएको पाइन्छ । सञ्चालकहरूको संख्या घटाउनु, सञ्चालकहरूलाई कर्जा लिनमा बन्देज लगाउनु, संस्थापक शेयर धितोको सीमा तोक्नु, शेयर होल्डिङको सीमा तोक्नुजस्ता काम यसका लागि भएका छन् ।
यति हुँदाहुदै पनि प्रायः बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा सीमित व्यापारीको हालिमुहाली रहेकाले संस्थागत सुशासनको खिल्ली उडिरहेको पाइन्छ । व्यापारीले लगानी मात्र गर्ने र दैनिक व्यवस्थापन तथा प्रशासन सञ्चालनमा लगानीकर्ता तथा सञ्चालक समितिबाट अहस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी स्वतन्त्र व्यवस्थापनको जिम्मा व्यावसायिक व्यक्तिलाई दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै व्यवस्थापनको जिम्मा लिने व्यक्ति वा समूहले पनि निश्चित प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । संस्थागत सुशासन, व्यावसायिक आचरण, पेशागत मर्यादा, वित्त व्यवस्थापनको अनुभव कमाएका व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्छ । विगतमा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिँदा तिनको जुनी फेरिएको थियो । निजीक्षेत्रमा सञ्चालित वाणिज्य बैंक तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिबाट संस्थाको संख्या कम गरी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । साथै, व्यवस्थापन सम्झौताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्पष्ट मार्गनिर्देशन र नियमित नियमन र निरीक्षण अपरिहार्य छ । यसो हुँदा मर्जरबाट बैंक वित्तीय संस्थाको संख्यामा कमी आउँछ । राष्ट्र बैंकबाट पर्याप्त निरीक्षण र अनुगमन गर्न सकिन्छ । देशमा ठूला लगानीको आवश्यकता पूर्ति हुन्छ । संस्थामा व्यावसायिकता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा बढ्न गई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्छ । लागत खर्च कम हुन्छ । पर्याप्त र अनुभवी कर्मचारीबाट सेवा लिन सकिन्छ । पूँजी बजारमा यसको महŒव बढ्नेलगायत समग्र अर्थ व्यवस्थामा नै सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।
व्यवस्थापन सम्झौताले व्यापारिक मानसिकताभन्दा व्यावसायिक मानसिकताबाट संस्था सञ्चालन हुन्छ । संस्थागत सुशासनमा सम्झौता नहुने, सक्षम व्यवस्थापन समूहले राम्रो दक्षता देखाउन पाउने र उसको शाख बढ्ने देखिन्छ । साथै, कर्मचारीहरूको सेवा ग्यारेन्टीका कारण सेवा परिवर्तन कम हुने र अन्ततः बैंक, वित्तीय संस्थाको स्थायित्वबाट देशको समग्र आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने कुरा निश्चित छ । अन्य सार्वजनिक र व्यापारिक संस्थामा समेत यस प्रकारको व्यवस्थापन सम्झौताको प्रचलन बढ्दै गई व्यावसायिकता र संस्थागत सुशासनको जग बलियो भई व्यापारिक र आर्थिक वातावरण प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
लेखक अधिवक्ता एवम् पूर्व बैंकर हुन् ।